Ku saabsan Carewell | Carewell SEIU 503
Carewell SEIU 503 waa qoyska tababarka iyo manfacyada adag ee ay bixiso SEIU 503 daryeelka guriga iyo bixiyeyaasha taageerada shaqsiyadeed si kor loogu qaado noloshooda. Si cad loo bixiyay, si fudud oo la isku halleyn karo, tani waxay siineysaa xasiloonida, caafimaadka, xirfadaha, iyo tababbarka shaqaalaha u qalma.
Dhammaan tababarada iyo waxtarrada waxaa bixiya RISE Partnership , oo ah adeeg kaalmooyin faa'iido u ah shaqaale.
Baro wax badan oo ku saabsan sida Tababbarka iyo Faa'iidooyinka Carewell ay u qaabeeyaan shaqaaluhu iyagoo u maraya Amaanadahooda Maareynta Shaqada.
Hel wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Tababarka Carewell iyo Faa'iidooyinka.
Miyaad tahay xirfadle ku-meel-gaar ah oo diyaar u ah inuu ku biiro kooxdeena?